आज ठूली एकादशी ! यसरी गर्नुहोस् पुजा र पाउनुहोस् यस्तो फल – Buddha Khabar
#1 News Portal in Nepal
आज ठूली एकादशी ! यसरी गर्नुहोस् पुजा र पाउनुहोस् यस्तो फल
By Buddha Khabar on Jul 12, 2019
असार शुक्ल एकादशी शुक्रबार तुलसी रोपण गरेर ठूली एकादशी मनाइँदैछ ।
भगवान् विष्णु चार महिनाका लागि जल शयनीमा रहनुहुने शास्त्रीय मान्यताअनुसार तुलसी रोपण गरेर व्रत बसेर यो पर्व मनाइँदैछ । यो दिन जान्नेले पानी रोटी खान्छन् भनिन्छ । डा. लोकराज पौडेलका अनुसार यो एकादशीपछि हरिबोधनी एकादशीका दिनसम्म शुभकार्य नगर्नु भन्ने ज्योतिषीय मान्यता छ । यो अवधिमा ज्योतिषले श्ुभकार्यको घडीपला तोक्ने गर्दैनन् ।
तुलसीलाई आयुर्वेदमा महìवको वनस्पतिका रूपमा व्याख्या गरिएको वैद्यराज सुवर्ण वैद्य बताउनुहुन्छ । पशुपतिमा शुक्रबार आर्यघाट बागमतीमा तुलसीको डोरो राख्ने चलन छ । अमालकोट कचहरीका द्वारे पूर्ण डङ्गोलका अनुसार आर्यघाटमा अमालबाट तुलसीको बिरुवा दिएर रोपण आयोजना भएको छ । गोरखापत्रअनलाइनबाट साभार
हिन्दू समाजमा तुलसीको महत्व
हिन्दू मान्यता अनुरुप हरेकको घर आँगनमा तुलसी रोप्न अनिवार्य झै मानिन्छ । हिन्दू धर्म शास्त्रमा उल्लेख भए बमोजिम तुलसीलाई पूजनीय , पवित्र र देवीको स्वरुपमा लिने र पूज्ने गरिन्छ । घरमा तुलसी रोपेपछि १० कुरामाथि विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक मानिन्छ । तुलसी रोपिएको घरमा सबै देवी देवताको विशेष कृपा रहने विश्वास पनि गरिन्छ । घरमा सकारात्मक र सुखद उर्जाको स्रोतकोरुपमा तुलसीलाई लिने गरिन्छ । तुलसी रोपिएको घरमा धनको कमी नहुने र परिवारका सबै सदस्यलाई स्वास्थ्य लाभ हुनेसम्मको विश्वास समेत गरिन्छ । शास्त्रमा उल्लेख गरिएका तुलसीको खास महत्व यस्ता छन् ।
१.तुलसीको पात कहिले पनि चपाउनु हुँदैन
तुलसीको सेवन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा यस्को पातलाई कहिले पनि दाँतले चपाउनु हुँदैन । सीधै निल्नु नै उत्तम मानिन्छ । यसरी तुलसीको पातको सेवन गर्दा धेरै रोगहरुबाट मुक्ति पाउने विश्वास गरिन्छ । तुलसीको पातमा पारा धातु भन्ने तत्व रहने हुँदा यसलाई रोग विनाशक मानिन्छ । यदि यस्को पात दाँतले चपाएर निलेको खण्डमा दाँतको लागि भने हानीकारक मानिन्छ । त्यसैले पनि पात नचपाई सर्लक्कै निल्नु नै उचित मानिन्छ ।
२. शिवलिंगमा तुलसी कहिल्यै पनि चढाउनु हुँदैन
शिवपुराणमा उल्लेख भए अनुसार शिवलिंगमा कहिले पनि तुलसीको पात चढाउनु हुँदैन । यसको बारेमा एउटा कथा कोरिएको छ । कथाका अनुसार सत्ययुगमा दानव राजा शंखचुडकी धर्मपत्नीको नाम तुलसी थियो । तुलसीको पतिब्रत धर्मको शक्तिका कारण सबै देवी देवता शंखचुडलाई हराउन असमर्थ थिए । त्यही कारण भगवान विष्णुले छल गरेर तुलसीको प्रतिबत धर्म भंग गरिदिए । त्यसपछि भगवान शिव शंखचुडलाई बध गर्न सफल भए ।
जब यो रहस्य तुलसीलाई थाहा भयो तब उनले भगवान विष्णु ढुंगा अर्थात पत्थर र झार हुने श्राप दिइन । त्यो श्रापलाई स्वीकार गरेर भगवान विष्णु नेपाल र विशेषत गण्डकी क्षेत्रमा रहनु भएको विश्वास गरिन्छ । त्यसै पनि भगवान विष्णुको पत्थररुप शालीग्राम कालीगण्डकी नदी आसपासमा मात्र पाइने गरिन्छ । जुन सत्यलाई संसारका हिन्दूले स्वीकारेका छन् । अर्को श्राप झार हुनु परोस भनेर दिएपछि भगवान विष्णु तुलसीको वृक्ष बनेर रहनु भएको विश्वास गरिन्छ । यसपछि अधिकांश पूजाआजामा तुलसीको उपयोग विशेषरुपमा गरिन्छ । तर शंखचुडको पत्नी भएको कारण तुलसीको पात शिवलिंगमा भने कहिल्यै पनि चढाइदैन ।
३. तुलसीको पात विशेष दिन चुँडनु हुँदैन
तुलसीको पात केही खास दिन भने चुँडनु हुँदैन । एकादशी, आइतबार , सूर्य र चन्द्रग्रहण लागेको समयमा तुलसीको पात दिन वा रात जतिखेर चुँडे पनि अनिष्ट हुने मान्यता छ । विना कारण तुलसीको पात कहिले पनि चँुडनु उचित मानिन्न । अनावश्यकरुपमा तुलसीको पात चुँडे तुलसीको वृक्ष नष्ट गरे बराबरको पाप लाग्ने मान्यता छ ।
४. हरेक दिन तुलसीको पूजा गर्नु फलदायी
हरेक दिन तुलसीको पूजा गर्नु उत्तम र लाभदायी मानिन्छ । हरेक साँझ तुलसीको मठमा दियो जलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता समेत रहिआएको छ । यसो गर्दा माता महालक्ष्मीको कृपा सदैव रहने विश्वास छ ।
५.घरको वास्तु दोषको समाप्ती
तुलसी लगाउनाले घरको वास्तु दोष हट्ने विश्वास गरिन्छ । घर आँगनमा तुलसी लगाउँदा वास्तु दोष समाप्त भएर जाने विश्वास गरिन्छ । तुलसी रोप्नाले परिवारको आर्थिक स्थितिमाथि पनि शुभ प्रभाव पर्ने मान्यता छ ।
६.तुलसी रोपिएको घरमा खराब नजर समेत पर्दैन
तुलसी लगाएको घरमा कसैको पनि खराब नजर नपर्ने मान्यता छ । साथै घर आसपासमा कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक उर्जा पनि नपलाउने र सकारात्मक उर्जा वृद्धि हुने विश्वास गरिन्छ ।
७.तुलसीले वातावरण पनि पवित्र बनाउछ
तुलसी लगाइएको घर वरपरको वातावरण पनि पवित्र हुने मान्यता छ । तुलसी लगाउनाले हानिकारक सुक्ष्म किटाणुहरुले पनि घरमा वास पाउँदैनन । यही पवित्रताले घरमा माता लक्ष्मीको वास सहज हुने विश्वास गरिन्छ जस्को कारण घरको सुख र समृद्धिमा वृद्धि हुने मान्यता चलिआएको छ ।
८.घरमा तुलसीको सुख्खा वृक्ष नराख्नु
घरमा भएको तुलसीको मठमा तुलसीको वृक्ष केही कारण सुकेको खण्डमा त्यसलाई घरमा राख्नु उचित मानिन्न । तुलसीको वृक्ष सुकेको खण्डमा त्यसलाई पवित्र नदी तथा तलाउमा प्रवाहित गरिदिनु पर्छ । तुलसीको सुकेको वृक्ष राखे घरमा अशुभ हुने मान्यता छ । तुलसीको वृक्ष सुकेको खण्डमा अर्को स्वस्थ्य वृक्ष राख्ने सुझाव शास्त्रमा दिइएको छ ।
९.तुलसी आयुर्वेदको सञ्जीवनी बुटीका समान
आयुर्वेदमा तुलसीलाई औषधि अर्थात सञ्जीवनी वुटी समान मानिएको छ । तुलसीमा पाइने यस्ता धेरै गुण छन जस्ले धेरै विमारीहरुलाई टाढा राख्न सहयोग गर्छ र धेरै रोगहरुका लागि प्रतिरोधात्मक क्षमता तुलसीको पातमा हुन्छ । तुलसीको वृक्ष घरमा लगाउनाले तुलसीको वास्ना हावामा फैलदा विरामी फैल्याउने धेरै किटाणुहरु यस्को क्षमताले नष्ट हुन जान्छन ।
१०.तुलसीको पात सेवन गर्दा हुने फाइदा
विशेष दिन बाहेक अन्य दिन चुँडेर राखेको तुलसीको पात हरेक दिन सेवन गर्दा श्वासप्रश्वाससंग सम्बन्धित सबै रोगहरुबाट छुटकारा पाइने मान्यता छ । तुलसीको पात सेवन गर्दा विरामी हुनबाट वच्न सकिन्छ भने मौसम परिवर्तनबाट हुने विमारहरुबाट पनि बच्न सकिन्छ । तुलसीको पातमा हुने औषधीय गुणले मानिसको शरीरमा हुने रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई थप बढाउने हुँदा हरेक दिन तुलसीको पात सेवन गर्न उत्तम मानिन्छ ।
यो पनि भनिन्छ तुलसी भगवान कृष्णको अति प्रिय वस्तु मध्ये एक हो । त्यसैले पनि प्रतिदिनको पूजामा भगवान कृष्णको चरणमा तुलसीको दल या तुलसीको पात अर्पण गर्नु शुभ मानिन्छ ।
तुलसीको पात अर्पण गर्दा ‘तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः नामक मन्त्रोचारण गर्नु पर्ने मान्यता छ हिन्दू धर्म शास्त्रमा रहेकाे छ।
जापानमा नेपाली कामदार लैजाने तयारी : असोजमा भाषा र सीप परीक्षा हुँदै
गुल्मीका १२ स्थानीय तहमध्ये २ गाउँपालिका मासु र दुधमा आत्मनिर्भर हुँदै
मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा धोबीखोलाको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा
Author Buddha KhabarPosted on May 3, 2019
काठमाडौं – धोबीखोलावरपरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नक्सा संशोधनका नाममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा खोलावरिपरिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको...
सरकार खाडीमा पानी बेच्ने कुरा गर्दैछ, यता कर्णालीका जनताले खानेपानी पाएनन् !
Author Buddha KhabarPosted on May 4, 2019 May 4, 2019
काठमाडौं । अहिले सरकारले विदेशमा पानी बेच्ने कुरा गर्दै आएको छ । वीरेन्द्रनगरमा दुई महीनादेखि खानेपानीको सङ्कट बढ्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत...
धर्म-परम्पराः सिउँदोमा सिन्दुर किन लगाइन्छ ?
Author BUDDHA KHABARPosted on April 6, 2019
हाम्रा कति धर्म-परम्परा यस्ता छन्, जसलाई हामी जानी-नजानी अनुसरण गरिरहेका छौं । जस्तो प्रसाद किन खाइन्छ वा बनाइन्छ ? मन्त्र किन उच्चाहरण गरिन्छ ? कलश...
बेवारिस महिलाको उपचार सुरु
Author BUDDHA KHABARPosted on April 7, 2019 April 7, 2019
राजविराज : हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भई जीवनमरणको संघारमा पुगेकी बेवारिस महिलाको उपचार सुरु भएको छ। ‘घाइते महिला अस्पतालमा बेवारिसे’ शीर्षका अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशन...
राजावादी संघ संगठन एक ठाउँमा आए,अब के होला नेपालको राजनीतिक अवस्था ?
Author BUDDHA KHABARPosted on March 30, 2019
काठमाडौँ, १५ चैत । शुक्रबार राजावादी पार्टी तथा संघसंगठन एक ठाउँमा भेला भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रिक गठबन्धनले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको औचित्यबारे...
breaking:गोरखामा जन्ती र बेहुली पक्षबीच कुटाकुट, एकको मृत्यु
Author Buddha KhabarPosted on May 2, 2019
गोरखा, १९ बैशाख । जन्ती र बेहुली पक्षबीच कुटाकुट हुदाँ एक जनाको ज्यान गएको छ । केटी जिस्काएको निहुँमा बुधबार लमजुङको राइनस नगरपालिका-४ अल्कटारबाट...
बुटवल,रुपन्देही Email: info@buddhakhabar.com buddhakhabar1@gmail.com Phone: +९७७-९८०२९१८८८०, ९८६६६५७९९० Web: www.buddhakhabar.com
© 2019 www.buddhakhabar.com | Designed by A.P. Media Publications Pvt. Ltd.